Android Launcher izay hanampy anao hitahiry bateria | Androidsis
Android Launcher izay hanampy anao hitahiry bateria
Francisco Ruiz | | Fampiharana Android, bateria, Tutorials
Androany aho te-hanolotra anao a Mpandefa ho an'ny Android izay hanampy antsika ara-bakiteny hitahiry ny batterie Android-nay, Launcher tena tsotra sy tsotra nefa manana fitaovana tena mahaliana izay ahafahantsika mitahiry be amin'ny bateria.
Ao amin'ilay horonan-tsary mifatotra izay navelako taminao ambonin'ireto andalana ireto ihany, eo am-piandohan'ny lahatsoratra dia asehoko anao ny zavatra rehetra azonay omena anay Android Launcher izay mampanantena fitehirizana bateria betsaka amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso sy fanaraha-maso ireo fampiharana ampiasainay isan'andro handinihana azy ireo sy hijerena ireo fifanolanana ateraky ny rindranasa izay azo antoka fa tsy fantatsika fa mihazakazaka any ambadika any ary mandany ny bateria sy ny loharanon'ny terminal Android.
The Launcher, ahoana no ahafahany manao izany, afaka manafaka sy mametraka azy maimaim-poana isika ary tsy misy doka na fividianana miharo mivantana avy amin'ny Google Play Store, izay fivarotana fampiharana ofisialy ho an'ny Android. Eo amin'ny faran'ny lahatsoratra dia namela rohy mivantana anao aho hampidinana ny fampiharana izay mamaly ny anaran'ny Power + Launcher Battery Saver, anarana efa nofariparitana ao amin'ny misy azy ireo.
1 Inona no atolotry ny Power + Launcher Battery Saver antsika?
1.1 Power + Launcher Battery Saver Features
2 Sintomy Power + Launcher Battery Saver maimaim-poana avy amin'ny Google Play Store
3 Galeria sary mpamonjy herinaratra Power + Launcher
Inona no atolotry ny Power + Launcher Battery Saver antsika?
Power + Launcher Battery Saver, avy amina mpampiasa interface na Android Launcher ny tsotra indrindra azontsika atrehana, manolotra antsika ny fiasan'ny Android Launcher io, nefa tsy tafiditra ao anaty fikirakirana na fanaingoana azy hatramin'ny niandohany dia kendrena amin'ny fanatsarana ny rafitra fiasanay Android Satria ny baterian'ny fitaovantsika dia mety haharitra ora maromaro isan'andro.
Anisan'ireo fampiasa na curiosities azontsika asongadina amin'izany Android Launcher izay hanampy antsika hitahiry bateria, azontsika atao ny manasongadina ireto lafiny manaraka ireto:
Power + Launcher Battery Saver Features
Mpandefa amin'ny endrika AOSP madio indrindra ary na ny vatasarihana fampiharana aza dia mitovy amin'ny an'ny Cyanogenmod.
Mety hitranga avy amin'ny sehatry ny famoahana herinaratra manafina apps tanteraka harovana tsy ho hitan'ny liana.
Mpadio ram miaraka amina sary mihetsika mampihomehy.
Smart launcher izay hamakafaka ny fampiasana ny fampiharana mba hanondroana ireo izay mandany bateria be indrindra ao aoriana ary afaka mametraka azy ireo hibernate.
Rindrambaiko fitantanana hibernation iray-mikasika iray.
Torohevitra momba ny fitehirizana bateria mahomby amin'ny safidy Soso-kevitra fitehirizana bateria.
Mode eco amin'ny efijery hidin-trano amin'ny alàlan'ny safidy Lock Screen Eco Mode ho an'ny tahiry bateria lehibe kokoa nefa tsy misy fampandrenesana tsy hita.
Amin'ny ankapobeny dia a tena tsara ny Android Launcher izay nosedraiko tamin'ny Lenovo Vibe K5 Note nandritra ny roa andro teo ho eo. Roa andro izay nahitako fiakarana marim-pototra tao amin'ny Android finday izay nadika tamim-pitaka 40% ny fahaleovan-tena bebe kokoa noho ilay teo alohan'ny fametrahana ny Launcher.
Sintomy Power + Launcher Battery Saver maimaim-poana avy amin'ny Google Play Store
Galeria sary mpamonjy herinaratra Power + Launcher
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Tutorials » bateria » Android Launcher izay hanampy anao hitahiry bateria
Manaraka ny pejinao aho ary ny marina dia tena tiako ny hahafantatra ny zavatra rehetra mifandraika amin'ny tontolon'ny Android. Fa ny fanontaniako manaraka dia mankany amin'ity lahatsoratra ity sy ireo zavatra hitako momba an'io fomba io: maninona izy ireo no "mandainga" be, ohatra, ity fampiharana izay lazain'izy ireo hevitra ity?
Azoko fa ny mpikarama dia mety nandoa azy ireo (na tsia) hanao dokambarotra ilay mpandefa vaovao fa tsy afaka milaza amin'ny olona izy ireo fa ny fampiharana an'io toetra io dia nanatsara ny fizakan-tenany ... 40%! Fahagagana izany!
Amin'izany dia tsy midika aho fa ratsy ny fampiharana (tsy nanandrana azy koa aho, ary fihatsaram-belatsihy amiko ny hanome ny hevitro) saingy fantatrao tsara fa io karazana fampiharana io dia tsy manatsara izany haavo izany. Eny, afaka manampy amin'ny fomba sasany na manatsara ny fampisehoana raha ampitahaina amin'ny mpandefa launcher hafa.
Ny zavatra tiako haleha: Betsaka no mamaky an'ity bilaogy ity ary mahafinaritra azy ireo izany. Saingy tsara kokoa raha toa ka kendrenao kokoa izy ireo ary, raha terena hanolotra fampiharana vaovao izy ireo, dia ... tsaratsara kokoa. Izany no ilazako azy satria efa hitako io karazana lahatsoratra io ho an'ny fampiharana hafa ary tsy tsara izany.
Alao an-tsaina angovo mitahiry bateria 40% bebe kokoa ... Mety ho utopia izany ary maodely finday maro no ho voatahiry miaraka amin'ity mpandefa ity (na izay manome fampiasa mitovy amin'izany).
Tsy misy fandikan-dalàna (ny mifanohitra amin'izay) misaotra anao tamin'ny fotoananao sy ny fanoloran-tenanao aho.
Hitohy hamaky azy ireo aho!
Salama Martín, izaho manokana tsy manao lahatsoratra tohana na karama, na inona na inona karazana fampiharana izay ampirisihiko saika isan'andro dia matetika aho no mitady manokana mandany ora amin'ny fizahana ny Play Store sy ireo forum manokana. Amin'ity tranga ity dia tsy maintsy milaza aminao aho fa tiako ny hanandramanao ity Launcher ity satria araka ny fitsapana nataoko manokana momba ny Samsung Galaxy S6 Edge Plus izay nametrahako azy io nandritra ny telo na efatra andro taorian'ny nizahako sy nanolorako Romana samihafa, nitranga tamiko fa tsy nahatratra efijery adiny roa sy sasany raha tsy efa efijery efa ho adiny telo sy sasany.
Ity dia angon-drakitra iray tanjona satria nosedraiko manokana tamin'ny Android nataoko izany, koa manasa anao aho hanandrana azy ary lazao amiko hoe manao ahoana ianao.
Nahatonga ahy haniry ny hanandrana izany ka izany no hataoko 😉 Mpankafy manandrana zava-baovao mandra-pahitako ilay mety indrindra amin'ny fampiasa ahy.
Misaotra tamin'ny torohevitra ary manantena aho fa ho tafita ny hafatro.
Roger killosaki dia hoy izy:
Tena nanandrana aho. Azafady mba hazavao amiko ny fomba fanesorana azy.
Valiny tamin'i Roger Killosaki
Ny Lenovo Yoga Book A12 tsy fantatra dia hita ao Amazon